TC Candler က‌ ထုတ်ပြန်တဲ့ ကမ္ဘာ့အချောဆုံး မျက်နှာပိုင်ရှင် စာရင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ပိုင်တံခွန် နဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည် - Chelmo News Portal
Home›Exclusive›TC Candler က‌ ထုတ်ပြန်တဲ့ ကမ္ဘာ့အချောဆုံး မျက်နှာပိုင်ရှင် စာရင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ပိုင်တံခွန် နဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်
TC Candler က‌နေ ကမ္ဘာ့ အချောဆုံး မျက်နှာပိုင်ရှင် အမျိုးသား နဲ့ အမျိုးသမီး စာရင်းကို နှစ်စဉ် ထုတ်ပြန်နေကျ ဖြစ်ပါတယ်။ (၂ဝ၂ဝ) ခုနှစ် အတွက် အချောဆုံး မျက်နှာပိုင်ရှင် အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရနိုင်ချေရှိတဲ့ ဆန်ခါတင်စာရင်း ကိုတော့ သူတို့ရဲ့ IG မှာ ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှစ် အတွက် ဆန်ခါတင် စာရင်းမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံက မော်ဒယ် မင်းသားချော ပိုင်တံခွန် နဲ့ သရုပ်ဆောင် ဝတ်မှုန်ရွှေရည် တို့ ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။
We may not be able to talk much when we meet but know that you`re always on my mind. Now have fun on ur trip.
A post shared by Paing Takhon (@paing_takhon) on Oct 8, 2019 at 11:52pm PDT
A post shared by Wutt Hmone Shwe Yi (@wutthmoneshweyi) on Aug 6, 2020 at 3:05am PDT
ပိုင်တံခွန်က တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတင် မကပဲ ထိုင်းပရိသတ်တွေကြားမှာပါ အရမ်းကို နာမည်ကြီး နေသူပါ။ ထိုင်းမှာပါ Fan Meeting ပွဲ ကျင်းပနိုင်ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး မြန်မာအနုပညာရှင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
PAING TAKHON — Official Nominee for The 100 Most Beautiful / The 100 Most Handsome Faces of 2020. Congratulations! #tccandler #100mostbeautiful2020 #100mosthandsome2020 #paingtakhon #myanmar #burma #actor #model
A post shared by TC Candler (@tccandler) on Oct 13, 2020 at 11:49am PDT
ချောမောတဲ့ ရုပ်ရည်၊ အရပ်မြင့်မြင့်၊ Body အမိုက်စား ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူမို့ မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေ ရဲ့ သဲသဲလှုပ် ဝန်းရံအားပေးမှုကို ရရှိထားပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အောင်မြင်မှုကြောင့် TC Candler ရဲ့ 100 Most Handsome Faces ဆန်ခါတင် စာရင်း ဝင်နိုင်ခဲ့တာပါ။
ချစ်လို့ 🖤 #dogsofinstagram #dogstagram #dogsofinsta #doglovers #dog #doglover #cutedog #dog #animallovers #animallover #animallove #adorable
A post shared by Paing Takhon (@paing_takhon) on Aug 29, 2020 at 9:33pm PDT
သရုပ်ဆောင် ဝတ်မှုန်ရွှေရည် ကတော့ သူမရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အမူအရာတွေကြောင့် လူကြိုက်များတဲ့ မင်းသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဝတ်မှုန်ရွှေရည် ကို ကစ် လို့လည်း ခေါ်ကြပါတယ်။
WUTT HMONE SHWE YI — Official Nominee for The 100 Most Beautiful / The 100 Most Handsome Faces of 2020. Congratulations! #tccandler #100mostbeautiful2020 #100mosthandsome2020 #wutthmoneshweyi #myanmar #burma #actress #model
A post shared by TC Candler (@tccandler) on Oct 20, 2020 at 7:04pm PDT
နိုင်ငံတကာ ချစ်ကြည်ရေး ဇာတ်ကားတွေ အနေနဲ့ ထိုင်းမြန်မာချစ်ကြည်ရေး ဇာတ်ကား အဖြစ် “ဘန်ကောက်မှ မန္တလေးသို့”၊ ဂျပန်မြန်မာချစ်ကြည်ရေး ဇာတ်ကား အဖြစ် “ဇာတိမြေ” နဲ့ ကိုရီးယားမြန်မာချစ်ကြည်ရေး ဇာတ်ကား အဖြစ် “တိမ်တွေပေါ်ကပန်း” တို့ကို ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။
Who is loving all the fall colours right now ? 🍂🍂 📸 @akt24
A post shared by Wutt Hmone Shwe Yi (@wutthmoneshweyi) on Oct 17, 2020 at 7:29am PDT
သူမရဲ့ ပြောင်မြောက်တဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့် ထူးချွန်ဆုတွေကိုလည်း ဆွတ်ခူးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ (၂၀၁၃) ခုနှစ်မှာ “နင်စေရင်” ဇာတ်ကားနဲ့ အမျိုးသမီး ဇာတ်ဆောင်ဆု နဲ့ (၂၀၁၄) ခုနှစ်မှာ ” နှလုံးသားဖြင့်ပြုလုပ်သည်” ဇာတ်ကားနဲ့ အမျိုးသမီး ဇာတ်ပို့ဆု တို့ကို ရရှိထားပါတယ်။
မြန်မာ့ရုပ်ရှင်နှစ်တစ်ရာပြည့် အမှတ်တရ 📸 @jason_yaz
A post shared by Wutt Hmone Shwe Yi (@wutthmoneshweyi) on Oct 16, 2020 at 1:16am PDT
TC Candler ရဲ့ 100 Most Handsome Faces ဆန်ခါတင်စာရင်းမှာ ပါဝင်တဲ့ အခြား နာမည်ကြီး အမျိုးသား အနုပညာရှင်တွေ ကတော့ V ၊D.O၊ Kai၊ GD၊ Chanyeol ၊Riz Ahmed ၊Travis Fimmel၊ Lucas Bravo၊ Kris Wu၊ Tom Hardy၊ Park Seo-joon၊ Ji Chang-wook၊ Robert Pattinson၊ Park Bo-gum၊ David Gandy၊ Kim Soo-Hyun၊ Daniel Radcliffe…၊ Brad Pitt တို့ လည်း ပါဝင်ပါတယ်။
TC Candler ရဲ့ 100 Most Handsome Faces ဆန်ခါတင်စာရင်းမှာ ပါဝင်တဲ့ အခြား နာမည်ကြီး အမျိုးသမီး အနုပညာရှင်တွေ ကတော့ MIN PECHAYA၊ SONG HYE-KYO၊ BEYONCE၊ BELLA HADID၊ TAEYEON၊ KENDALL JENNER၊ DUA LIPA စတဲ့ အနုပညာရှင်တွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
#Chelmo #ChelmoTeam #TCCandler #100MostHandsomeFaces2020
Tags#Chelmo #ChelmoTeam #TCCandler #100MostHandsomeFaces2020
‘Maya Awards 2020’ မှာ ဆုရရှိခဲ့ကြတဲ့ ထိုင်းအနုပညာရှင်များ
Instagram မှာGOT7 အဖွဲ့ဝင်သုံးဦးကို unfollow လုပ်ခဲ့တဲ့ J.Y.Park